“Ma jiro qof la mid ah Messi” – Ansu Fati – Gool FM
(Barcelona) 21 Okt 2021. Weeraryahanka Barcelona Ansu Fati ayaa ka hadlay waxyaabo badan kadib markii uu heshiiska u kordhiyay kooxda reer Catalonia.
Barcelona ayaa bayaan rasmi ah ku shaacisay inay qandaraaska u kordhisay xiddigeeda da’ada yar ee Ansu Fati.
Laacibka reer Spain ee Ansu Fati ayaa u saxiixay kooxda Barcelona heshiis gaaraya ilaa iyo 30-ka June 2027, waxaana la sheegay in qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa uu gaarayo 1,000 milyan euro.
Ansu Fati oo maanta wareysi ku bixiyay Barca TV ayaa wuxuu ka hadlay waxyaabo badan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u sheegay wakiiladayda in hadafkaygu yahay inaan sanado sii joogo Barcelona.”
“Wax walba si degdeg ah ayay u dhaceen, waxaan gaaray riyadaydii, waxaana rajaynayaa inaan ka soo baxo kalsoonida mas’uuliyiinta kooxda.”
“Waxaan si fiican u xusuustaa goolkeygii ugu horreeyay ee kooxdii koowaad aan ka dhaliyay Osasuna, iyo sidoo kale goolkeygii Levante ka dib markii aan ka soo laabtay dhaawac.”
“Dabcan Messi iyo ciyaartoy badan ayaa xirnaa maaliyadda 10 –aad, Laakiin waan degganahay mana dareemayo wax cadaadis ah waana ogahay dhab ahaan waxa aan kooxda ka caawin karo.”
“Ma jiri doono ciyaaryahan sida Messi oo kale ah, mana jiri doono qof sida Puyol ama Xavi oo kale ah … wadadayda ayaan mari doonaa.”
Ciyaaryahanka da’ada yar ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay ka hadlida kulanka la wada sugayo ee El Clásico, wuxuun yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay kulanka El Clasico, waxaan la ciyaareynaa kooxda aynu xilfaltano, waxaana rajeyneynaa inaan ka faa’ideysano inaan ku ciyaarno garoonkeena iyo taageerayaashayada si aan u gaarno natiijo wanaagsan.”